Mahajanga : Nisesisesy ny vono olona
jeudi, 12 janvier 2017 11:46
Vao niandoha ny taona 2017 dia efa olona efatra sahady no maty nisy namono. Tranga iray ny tao Mangarivotra nahafaty ilay mpivarotra finday teny amin’ny Vy lava, ny faharoa dia teny Antanambao-Sotema nahafatesan’ilay rangahy mpilalao moraingy, ny fahatelo dia ity tao amin’ny Campus Ambondrona ity, rangahy tratra nangalatra gana ary ny farany dia tao amin’ny Fokontany Ambondrona izay nahafatesana tovolahy iray sakaizana vadina teratany vahiny.
Mikasika ity faty olona tao Ambondrona ity dia efa ela no nisaraka ilay tovolahy sy ilay ramatoa vadina teratany vahiny io saingy tavela tany amin’ilay ramatoa ny findainy. Tonga haka ny findainy ilay tovolahy nony taty aoriana kinanjo efa nomen’ilay ramatoa sakaizany ny mpiambina azy ilay finday.
Teo no nampisy disadisa teo amin’ilay tovolahy sy ny sakaizany. Niditra ny mpiambina ilay ramatoa, ary nikapoka avy hatrany. Nitsitra tamin’ny tany, tsy nahatsiaro tena ilay tovolahy. Nikoropaka nitondra azy teny amin’ny hopitaly ilay ramatoa. Nilaza ny mpitsabo fa maty ity olona entin’izy ireo ity.
Nitsoaka ilay mpiambina saingy voasambotry ny mpitandro ny filaminana teny amin’ny lalana hiazo an’i Mahavoky Atsimo-Mahajanga iny. Niaiky izy fa namono ilay tovolahy. Nosamborina ihany koa ilay ramatoa ary natolotra ny fitsarana.